Sneaker အဘို့အရှည်လျားတိုတို, အင်္ကျီနှင့်ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ, Hood နှင့်မရှိဘဲစားဆင်ယင်အားကစားစတိုင် - ဖက်ရှင်အမျိုးသမီးအားကစားဝတ်စုံ
အားကစားဆင်မြန်း - အဘယ်အရာသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့နှင့်အတူဝတ်ဆင်နည်း
ဘောင်းဘီရှည်နှင့်ဆက်စပ်သည် T-ရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်အကျီပါဝင်သည်ဟု, အဆင်ပြေဝတ်စုံဝတ်လျက်, အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဆန်သောစတိုင်ကြိုက်တတ်တဲ့သူကိုမိန်းကလေးများ။ သို့သော်ရက်စွဲခြင်းငှါ, ထုတ်လုပ်သူများကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့် wear စဉ်အတွင်းနှစ်သိမ့်ပေးကြောင်းအားကစားဆင်မြန်းခြင်းနှင့်လည်းအလွန်ကောင်းတဲ့နှင့်မူရင်းကိုကြည့်နေကြသည်။
တင့်တယ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေအားကစားအမျိုးသမီးဆင်မြန်းအချိန်ကြာမြင့်စွာလူကြိုက်များထိပ်မှာရှိပါတယ်။ သူတို့အဆင်းကွဲပြားအချိန်နှင့်အတူ, သို့သော်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုမဆုံးရှုံးခဲ့ပေ။ ထိုထုတ်ကုန်အလွန်ကောင်းစွာနေကြသည် Sneaker နဲ့ပေါင်းစပ် နေတဲ့ပြားချပ်ချပ်ဝါးပေါ်တွင် Sneaker, sliponami နှင့်အခြားဖိနပ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်အကြီးအဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်, ကျောပိုးအိတ်နှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ ဆုံးဖက်ရှင်အားကစားဆင်မြန်း 2017 အောက်ပါစာရင်းထဲတွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်:
စားဆင်ယင်ဝါးတားပိုလို - တမူထူးခြားသောကော်လာနှင့်ခလုတ်၏သေးငယ်တဲ့အတန်းနှင့်အတူနေရာလေးကိုနည်းနည်းအရာ;
တစ်ပါးပျဉ်းနှင့်အတူမော်ဒယ်။ သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောအရှည်, အလှဆင်ခြင်းနှင့် stylist ကွပ်မျက်မည်အကြောင်း, ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြုတ်သို့မဟုတ်မဖွစျနိုငျသောပါးပျဉ်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်စည်းလုံးညီညွတ်နေကြ;
လျောက်ပတ်အားကစားဝတ်စုံ, အမျိုးသမီးကိန်းဂဏန်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကွေးအလေးအနက် ပြု. နှင့်အမြင်အာရုံက၎င်း၏မွေခံရသောသူကိုအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားစေပါသည်။
အများအပြားလှပသောမင်းသမီး်စားဆင်ယင်အားကစားစတိုင်သာငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များများအတွက်သင့်လျော်သောကြောင်းယုံကြည်သော်လည်း, တကယ်တော့, ကဒါမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီမှာအမျိုးသမီးတွေနှင့်အထက်ကလေးများဝတ်ဆင်နိုင်မော်ဒယ်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့အဝတ်အစားများဤဆောင်းပါးကို၌များစွာသောအငယ်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ တင်ပြရွေးချယ်စရာတစ်ဦးကကျယ်ပြန့်တစ်ဦးချင်းစီကမိန်းကလေးကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အညာဘက်အရာရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုနှင့်သင်မသက်ဆိုင်အသက်, အသားအရေနှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းကလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Hood အားကစား Dress
ပင်ဟောလိဝုဒ်ကြယ်တို့တွင်လူကြိုက်များတစ်ပါးပျဉ်းနှင့်အတူစတိုင်, အဆင်ပြေနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အားကစားစားဆင်ယင်။ ဥပမာ, အဆိုတော် Kylie Minogue ၏ဗီရိုထဲမှာကြယ်ပွင့်ကိုမကြာခဏလမ်းလျှောက်သွားသည်နှင့်သူ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးရှက်မထားတဲ့အတွက်ပါးပျဉ်းနှင့်အတူ laconic ရှည်လျားအားကစားဝတ်စုံရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားသောအဝတ်သို့သော်သူတို့ကပါးပျဉ်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်စည်းလုံးညီညွတ်နေကြတယ်, ကွဲပြားခြားနားသောအရှည်နှင့် stylist သေဒဏ်စီရင်၏နိုင်ပါတယ်။
ဤသည်မှာအပိုင်းအစအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်မူရင်းကြည့်ပေမယ့်, အပြင်ကအကာအကွယ် function ကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ ထို့ကြောင့်ပါးပျဉ်း, မိုးရုတ်တရက်စတင်ခြင်းတစ်ဦးထုပ်များအတွက်အစားထိုးဖြစ်နှင့်လေတိုက်သို့မဟုတ်မိုးရေချိန်ထံမှ၎င်း၏မွေခံရသောသူကိုကာကွယ်ရန်, ဥပမာနိုငျသညျ။ အချို့မော်ဒယ်မှာပါးပျဉ်းဖြုတ်ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးဖြစ်ပွားမှုထဲမှာလုံလုံခြုံခြုံထုတ်ကုန်၏အဓိကခန္ဓာကိုယ်မှချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြောင့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်ဖြတ်အားကစားစားဆင်ယင်ဒူး၏အလယ်တွင်ရောက်ရှိဖို့။ အထက်ပိုင်းအတွက်သူတို့ပါးလွှာသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်ကြိုးနှင့်မည်သည့်စတိုင်အင်္ကျီလက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားမတ်မတ်သို့သော် "pyshechki" ရန်သူတို့သည်လည်းအလွန်ကောင်းကြည့်ရှုအကောင်းဆုံးငယ်ရွယ်ပြီးသွယ်လျမိန်းကလေးများဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်၏အထူးသဖြင့်စစ်မှန်သောပိုင်ရှင်များဖြစ်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သော "ပန်းသီး" အဖြစ်ကိုအပိုင်းပိုင်း တစ်သိသာခါးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတဲ့သူ။ ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောမီးခိုးရောင်အားကစားအဖြစ်ကြားနေအရောင်တစ်ဖြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပိုင်ထိုက်သော, စားဆင်ယင်မျက်နှာဖုံးများဒီလိုမျိုးဖို့အားလုံးကိုအားနည်းချက်တွေကိုနှင့်ကိန်းဂဏန်းအချို့သောအားနည်းချက်များဖွက်ထားပေးသည်။
Long ကအားကစားဂါဝန်, ကြမ်းပြင်ရောက်ရှိ, ညဦးယံ၌နွေရာသီလူတန်းစားပေါင်းစုံအတွက်အလွန်ကောင်းစွာသင့်လျော်သည်။ နေ့ကိုသူတို့တစ်တွေနည်းနည်းမသက်မသာဖြစ်နိုင်လျှင်, ထို့နောက်နေဝင်ချိန်ပြီးနောက်ယင်းသို့အိမ်သာအရှိဆုံးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အတွက်သိပ်သည်းပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းသောကြောင့်အေးခဲဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ ထို့အပြင်, အားကစားစတိုင်, cuffs အဖြစ်, drawstrings, Drawstring ပါးပျဉ်းနှင့်ဤဆင်မြန်း၏အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဤဒြပ်စင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆိုပါ Pierce လေတိုက်ခြင်းနှင့်မိုးရွာထဲကနေင်း၏မွေခံရသောသူကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ယင်း၏ပိုင်ရှင်၏ခြေရင်း၏အတိုအရှည်, ပြပွဲအခြားသူများအလှအပနှင့်သဟဇာတအားဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောနွေရာသီအားကစားဆင်မြန်း။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှသူတို့အားဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်ဖက်ရှင်သဟဇာတနှင့်ထူးခြားသောကျက်သရေပေးခြင်း, အောက်ခြေမှအနည်းငယ်တိုးချဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အထွေထွေစည်းမျဉ်းအဖြစ်ဤအိမ်သာစတိုင် Sneaker, Sneaker, loafers သို့မဟုတ်နဲ့ပေါင်းစပ်ကြသည် sliponami သို့သော်မိန်းကလေးအချို့တောက်ပနှင့်သာမန်ထက်ညနပေိုငျးပုံရိပ်တွေလာပြီ, ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နှင့်အတူဖိနပ်သူတို့နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့မကြောက်ဖြစ်ကြသည်။
အားကစားများအတွက်မော်ဒယ်များအကြားတစ်ဦးကိုအထူးနေရာအရပ်သည်၎င်း၏ပိုင်ရှင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နှစျသိမျ့ပေးသောတစ်စားဆင်ယင်ပိုလို, ယူထားသော။ ကြောင့်ဤအမှုသည်များ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုဖြတ်နှင့်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများ၏ပိုင်ထိုက်သော၎င်းထိုသို့နုပျိုသွယ်လျတဲ့မိန်းမတို့အဘို့စံပြဖြစ်တယ်, အနည်းငယ်အပိုကီလိုနှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေ။ ဤအတောအတွင်းအဆိုပါကိန်းဂဏန်းများ၏အားနည်းချက်မှအခြားသူတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်မရှိစေရေးအတွက်အဆုံးစွန်သောအမှု၌ယင်းဗီရိုပစ္စည်းများကိုပိုမိုလွတ်လပ်သောစတိုင်ရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုသည်။
ငယ်ရွယ်ဖက်ရှင်အဖြူပြိုင်ကားဆန်သောပိုလိုဝတ်စားဆင်ယင်နှင့်အတူအထူးသဖြင့်လူကြိုက်များ။ ဒါဟာတောက်ပအပြစ်မဲ့နှင့်အတန်ငယ်ဓမ္မကြည့်, ဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေမကြာခဏသူတို့ကိုယ်သူတို့များအတွက်ထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အနည်းငယ်အပိုကီလိုဂရမ် add နှင့်, ထိုမှတပါး, ကအရှင်ဒီလက်တွေ့ပင်ဖြစ်သည်မှအမြင်အာရုံက၎င်း၏ပိုင်ရှင်နိုင်စွမ်းဤအတောအတွင်းအဖြူရောင်အရောင်မော်ဒယ်။
မည်သည့်အရှည်၏အားကစားပိုလိုဆင်မြန်း၏အခြေအနေပေါ် မူတည်. အဝတ်အစား၏အောက်ပါဆောင်းပါးနှင့် တွဲဖက်. ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်:
ရိုးရှင်းတင်းနစ်ဖိနပ်, Sneaker, ပြေးဖိနပ်, loafers သို့မဟုတ် sliponami နှင့်တသားတ ensemble အတွက်သီးခြားထုတ်ကုန်အဖြစ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နှင့်အတူဖိနပ်တစ်ဦးစတိုင်မတ်မတ်ပိုလိုနဲ့ပေါင်းစပ်မမူ
အတူတူတင်းကျပ်စွာဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီ, အတူ dzhegginsy သို့မဟုတ်ဆတ်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဖိနပ်၏ရွေးချယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်. အကြံပြုချက်များဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်
များသောအားဖြင့်နှင့် တွဲဖက်. ဝတ်ဆင်ဖက်ရှင်အားကစားအင်ျကြီစားဆင်ယင် leggings သို့မဟုတ် leggings ။ နေ့စဉ် wear များအတွက်ကောင်းစွာသင့်လျော်သောအရာစတိုင်, မြို့ပြပုံရိပ်, ဒီပေါင်းစပ်။ ကလယ်ထွန်စက်ဘဝါးအပေါ်အဆင်ပြေ Sneaker သို့မဟုတ် loafers နှင့်ကြော့ခြေနင်းပြင်ဆင်ပြီးသုံးသို့မဟုတ်ဘွတ်ဖိနပ်နှစ်ဦးစလုံးဖွစျစနေိုဖြည့်စွက်။ ထိုအတောအတွင်းအချို့ကိစ္စများတွင်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ကိုလည်းသီးခြားလွတ်လပ်သည့်မတ်မတ်အဖြစ်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ကမ်းခြေအပေါ်လျှော့ပေါ့နေချိန်မှာဒါဟာရေကန်သို့မဟုတ်ကြောင့်အတွင်းခံအဝတ်အစားသို့မဟုတ်တစ်ရေချိုးဝတ်စုံကို၏သရုပ်ပြတားမြစ်ထားသည်မဟုတ်ရှိရာကအခြားသောအရပ်, ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဂျာစီ၏လုပ်အားကစားပွဲများတွင်ဆင်မြန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များရုံကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောကြည့်ရှုပါ။ သူတို့ကလုနီးပါး crumple, နှင့်၎င်း၏ပိုင်ရှင်များ၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံစံကိုယူပါဘူး, သုံးစွဲဖို့မယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူသောဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပစ္စည်းများကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးအဝတ်စျေးကြီးမဟုတ်, ဒါကြောင့်အဆင်းလှသောလိင်မဆိုသူတို့ကိုဝယ်ဖို့မတတ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီဦးစားပေး, မိန်းကလေးများနှင့်အမြိုးသမီးမြားပေါ်မူတည်ပြီးခေတ်သစ်စတိုးဆိုင်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အတွက်ပေးအပ်ထားတဲ့နွေရာသီများအတွက်ရှည်လျားသို့မဟုတ်အတို, တင်းကျပ်စွာသို့မဟုတ်ချောင်အားကစားဆင်မြန်းယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အားကစားအတွက်အတန်းများနှင့်အားကစားစတိုင်အဝတ်အစားအဆိုပါလူငယ်တက်ကြွနှင့်ပါးလွှာမိန်းကလေးဒါပေမယ့်လည်းအရွယ်အစားပေါင်း-အရွယ်အစားနှင့်အတူလှပသောအမျိုးသမီးများသာရရှိနိုင်ပါသည်။ ခေတ်သစ်ထုတ်လုပ်သူအဝလွန်အမျိုးသမီးတွေအတွက်မဆိုအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေလျက်, အပြင်, အမြင်အာရုံဟာသူတို့ရဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချဖို့နဲ့ချို့ယွင်းချက်ကိန်းဂဏန်းများဖုံးကွယ်ထားမထားတဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးရှိသည်။
လိုချင်သောရလဒ်အောင်မြင်ရန်, stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများအောက်ပါ၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖို့ "pyshechki" လစာအာရုံကိုအကြံပြု:
အနက်ရောင်ပြိုင်ကားဆန်သောအဝတ်အစားတွေကိုအမြဲတမ်းအမြင်အာရုံ volume ကိုလျော့ကျစေပါတယ်ဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်အဝတ်အရောင်နှင့်၎င်း၏စတိုင်, စတိုင်နှင့်အရွယ်အစားအလွန်အရေးပါမဟုတ်ကြလိမ့်မည်။ ကသာကိန်းဂဏန်းအိတ်နှင့်တူသောဖြည့်စွက်ပေမယ့်သူ့ရဲ့အမွေခံရသောသူကိုပါးလျစေ - အမျိုးသမီးများ၏ဒီတော့အပြည့်အဝပါသောသင်္ကန်းနှင့်ဆင်တူထက်ပိုကြီးတဲ့2အရွယ်အစား၎င်းတို့၏မတ်မတ်ကိုရှေးခယျြသငျ့ဘူး။ မဆိုအဝတ်အစားတိကျစွာချိန်ညှိရဦးမည် အရွယ်အစား မဟုတ်ရင်ရလဒ်မျှော်မှန်းဖို့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,
စုစုပေါင်းအလှအပတင်းကျပ်စွာသောအရာတို့ကိုရှေးခယျြသငျ့ဘူး။ ဒါကစတိုင်ပြဿနာဒေသများကိုအလေးပေး, သူတို့ကိုဖုံးကွယ်မရ;
MIDI စဉ်းစားကြီးမားတဲ့မိန်းကလေးရှည်လျားအအောင်မြင်ဆုံး။ သငျသညျမင်းသမီးလှပသောခြေထောက်လျှင်သို့သော်သူမကသူတို့၏ preference ကိုရှေးခယျြစရာဒူးကိုဖုံးလွှမ်းကြဘူးပေးနိုင်ပါသည်;
"pyshechek" တစ် tapering အင်္ကျီနှင့်အတူမော်ဒယ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်မဟုတ်;
မတ်မတ်တစ်ဦးသိပ်သည်း texture နဲ့လုံလုံခြုံခြုံဆက်ပြီးပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်သင့်ကိုဖန်ဆင်းသောအနေဖြင့်အထည်။
ပွင့်လင်းစားဆင်ယင် - ရှုပ်ထွေးသောမရှိဘဲဖက်ရှင်များအတွက်မတ်မတ်ထုတ်ဖော်
အတုကနေမူရင်းဂျင်မီ Choo ဖိနပ်အကြားခွဲခြားဖို့ဘယ်လို - ဂျင်မီ Choo ဖိနပ်?
2016 ခုနှစ်တွင်အရှိဆုံးအရှုပ်တော်ပုံမတ်မတ် Kim Kardashian ၏ 20
ဆန့်ဖိနပ် - ဘာလုပ်သနည်း
အဆိုပါ mansard ခေါင်မိုးများအတွက် insulator တွင်လည်းပစ္စည်းများ
ကိတ်မာရ်နှင့်ဂျေမီဘဲလ်ပထမဦးဆုံးမိမိအထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပြီးနောက်အလင်းဆီသို့ရောက် လာ. ,
အဆိုပါ VET ဤလှသောဆွဲဆောင်မှုပေါ်မှာရှိသမျှခြောက်သွေ့တဲ့!
အီဗာ Mende ရိုင်ယန် Gosling လက်ထပ်ချင်ပါဘူး
Gypsum လုပ်ထားတဲ့ Cornices
Stuffing နှင့်အတူဘာသာစကား Armenian lavash - စာရွက်